umthetho wabucala | WikiWon
Le ingasese yabakhenkethi WikiWon ibaluleke kakhulu kuthi. Kufuneka bazi yemfihlo yethu malunga inkcukacha ziqokelelwa okanye efunyenweyo kutyelelo yakho yaye isetyenziswa njani na. Yethu yemfihlo bangafundela ukuba kuyimfuneko. Ngoko ke kufuneka ukuba undwendwele iphepha le-njalo. Asizange ukuqokelela ulwazi lwangasese inxulumene nantoni olubona. Nazi ezinye iinkcukacha malunga yemfihlo yethu.
Kufuneka le nkcazelo ngathi websites ezininzi iimfuno injongo zokuphucula. log yethu kuba nezi zinto zilandelayo;
ISP / Umniki-sevisi ye-intanethi
Umhla neXesha Zempahla
Iikuki kunye Nezinto ze Web:
Maxa wambi xa kuyimfuneko, sisebenzisa cookies ukwenzela ukugcina ulwazi malunga ukhetho zeendwendwe zethu kunye nembali zeendwendwe ukubonelela ngeenkonzo ezingcono kubatyeleli zethu.
Malunga ne Google Advertising:
Umgaranto bakhonza yi Google, Inc., kunye neenkampani amanyeneyo isenokulawulwa ngokusebenzisa cookies. Ezi cookies kuvumela Google ukubonisa iintengiso ngokusekelwe namatyelelo kule sayithi kunye nezinye sayithi ezisebenzisa iinkonzo izaziso Google. Funda ukuba uphuma kanjani zokusetyenziswa cookie Google. Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, nayiphi yokulandelela yenziwe yi Google ngokusebenzisa iikuki kunye nezinye iindlela kuxhomekeke nkqubo Google, inkqubo yakhe.
Yintoni na le cookie kabili DART? Le cookie kabili DART isetyenziswa yi Google kwi iintengiso bakhonza kwiiwebhusayithi umvakalisi ukubonisa Adsense beposi umxholo. Xa abasebenzisi tyelela ngumvakalisi Adsense kaThixo website kwaye mhlawumbi imbono okanye nqakraza kwi ad, a cookie ukuze kwehla browser ukuba umsebenzisi lowo. Idatha eqokelelwe kwezi cookies ziya kusetyenziselwa ukunceda abavakalisi Adsense ngcono bakhonze nokulawula iintengiso kwisayithi zabo(s) nakuyo yonke iwebhu. Abasebenzisi ukuphuma ukusetyenziswa le cookie DART ngokutyelela i-Google ad kunye nesiqulatho network umgaqo-nkqubo.
Ukuthenga ne Lokuposa:
Iindwendwe bangacelwa ukuba ubhalise kwincwadana yango ngokubonelela igama email idilesi ukufumana uhlaziyo okanye ukuqhagamshelana nathi. Sisebenzisa inkqubo ekhuselekileyo yorhumo lokuphuma-in yaye sinelungelo ukuqhagamshelana ababhalisele ingcaciso enxulumene kule website kunye blog. Kwababhalisele ukuze ukubhalisa naliphi na ixesha kwaye zonke email eziza kuba i "Yeka" ilinki. Ukuba ufuna nayiphi na ingcaciso engaphezulu okanye unemibuzo malunga yethu yemfihlo nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge email ku moborate@gmail.com
Kufuneka ukuba ukulandela imigaqo-nkqubo yethu yabucala:
Ukuba nasiphi na isixhobo ayisebenzi ke nceda uqhagamshelane nam ndithi nam ingxaki yakho uhlobo ndingakunceda.
Ukuba naliphi na ikhonkco yaphukile,ayisebenzi uqhagamshelane nam yaye ndiza kwenza ukuba zichanekile 24 hours
Ukuba naliphi na ikhonkco kulanda engaphenduli ayisebenzi nceda ukuba nayiphi na ingxaki show kwi website yam qhagamshelana mna ndiza kuyenza
Ukuba ufuna naluphi na olunye isixhobo,plugins,imixholo,amanqaku ezingaphezulu qhagamshelana mna ndiya kongezelela isixhobo, nazo zonke ezi mfuno zingummiselo 24 yure, ukuba kuya kuba kunokwenzeka nje umyalezo me.
Ungaqhagamshelana nam nge page yam. Qhagamshelana nam